यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (श्रावण ०५ गते आइतबार)::Leading Nepal News
वि.सं. २०७६ श्रावण ०५ गते आइतबार तदनुसार ई. सं. २०१९ जुलाई २१ तारिख
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) राज्यस्थानमा चन्द्रमा भएकाले आज पर्याप्त लाभ लिन सकिने दिन हो । प्रशासनिक र राज्यपक्षबाट हुनुपर्ने काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । परोपकारी काममा रुचि बढ्ने योग छ । मिष्ठान्न भोजन प्राप्त हुनेछ । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ । अरुबाट तपार्इंका कामको उच्च मूल्याङ्कन हुने सङ्केत छ । बोलीको कदर हुनेछ । प्रशंसा, बढुवा वा जिम्मेवारी मिल्ने देखिन्छ । आत्मविश्वास र पराक्रममा वृद्धि हुनेछ । कलकारखाना र बन्दव्यापारमा फाइदा हुनेछ । गृहिणीहरूले धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फको काममा सहभागी बन्नु पर्नेछ भने छात्रछात्राले गुरुजन र मान्यजनको सहयोगमा कुनै नयाँ विषयको ज्ञान प्राप्त गर्ने समय छ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) पितृधनबाट फाइदा उठाउन सकिने छ । प्रशस्त आम्दानी हुने सङ्केत छ, तर आम्दानी गरिएको धन सञ्चय गर्न सकिंदैन । गृहस्थीले पारिवारिक बाध्यतामा र युवायुवतीले मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्छन् । विगतमा गरिएको श्रमको समुचित मूल्याङ्कन हुनेछ । स्वास्थ्यस्थिति राम्रो रहनुका साथै काम गर्ने जाँगर बढ्ने छ । पारिवारिक सुखसम्मृद्धिमा बृद्धि हुनेछ । काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नुका साथै उन्नति गर्ने अवसर प्राप्त हुने योग छ । जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने नवीन रोजगारीको सम्भावना छ । छात्रछात्राले प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नेछन् । कर्मक्षेत्रमा चन्द्रमा रहेकाले आज सबैले धैर्य र संयम भई परिश्रम गर्ने समय हो ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) भाग्यभावमा चन्द्रमा रहेकाले अवसर त प्रशस्त मिल्ने देखिन्छ, तर जान्नेबुझ्ने वा ठूलाबडाको सहयोग लिन सकेमा मात्र महत्त्वपूर्ण काम बन्ने सम्भावना छ । दूरदराजमा रहेको कुनै पर्यटकीय स्थल, तीर्थ वा मन्दिरको भ्रमण हुनसक्छ । घरपरिवारका काममा आजको केही समय बित्नसक्छ, बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षमताको उपयोग हुन सक्दैन । किशोरकिशोरी र युवावयका व्यक्तिहरूमा आफूलाई बेवास्ता गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर विरक्तिको भाव बहन सक्छ, तर ध्यान र योगको सहारा लिएमा मन शान्त र प्रसन्न बन्नेछ । गृहिणीहरूका लागि आज दान पुण्यका कार्यतर्फ मन जाने समय छ । आज सबैले परोपकारी काममा दिलचस्पी दिनु राम्रो हुन्छ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । तपाईंको कडा परिश्रम व्यर्थै खेर जान सक्छ । हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिसँग वादविवाद पर्न सक्छ । मनमा अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुने छ । घरायसी वातावरण, दाम्पत्य र प्रणयसम्बन्धमा आज असहजता आउनसक्छ । कसैसँग व्यर्थमा वादविवाद हुनसक्छ । गर्नु नपर्ने कामबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ, कुनै महत्वपूर्ण काम गर्न बाँकी भए आजलाई स्थगित गर्नु होला । बोलीमा संयमता अपनाउनु होला, आफूले भनेको कुराले विपरीत अर्थ प्रदान गर्न सक्छ । सामाजिक र परोपकारका मार्गमा अवरोध हुनेछ । आठौं भावमा चन्द्रमा रहेकाले बाटो काट्दा र सवारी चलाउँदा होस राख्नुपर्ने दिन छ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) काम गर्न जाँगर चल्नेछ, उत्साहवर्द्धक समय छ, आम्दानी बढ्न सक्छ । परिवारमा रमाइलो वातावरण सिर्जना हुनेछ, साथीभाइ र आत्मीयजनसँग भेटघाट हुनेछ । मनोरञ्जनमा रमाउन पाउनु हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ । साथीभाइबाट प्राप्त सल्लाहबाट गरिएको कामबाट फाइदा हुनेछ । पेसाव्यवसाय वा बन्दव्यापारबाट लाभ मिल्नेछ । स्वास्थ्यस्थितिमा अनुकूलता आउनेछ । मेजमानीको अनुकूलता प्राप्त हुनेछ । दाम्पत्यसम्बन्ध सुखद रहनेछ । प्रेम प्रसङ्ग र मनोरञ्जनका लागि अनुकूल समय छ । साझेदारी र सहकार्यमा गरेको हरेक क्रियाकलापबाट फाइदा हुनेछ । अलि मिहिनेत गर्नुपर्छ, जतिबेला पनि मन भावनामा डुब्ने समय छ ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) आज गरिएका जुनसुकै काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । शत्रुले तपाईंको छवि बिगार्ने प्रयास गरे पनि तिनको क्रियाकलापले उल्टै उनीहरूकै हानि हुनेछ । व्यवसायिक स्थितिमा सुधार आउने छ । स्वास्थ्य सबल रहने छ । हडबड र शीघ्रताले काम गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ । लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने मौका छ । आकस्मिक निम्तोमा सहभागी हुने सम्भावना छ । मिष्ठान्न भोजनको अवसर आउने छ, तर आहारविहारमा विशेष सतर्क रहनु राम्रो हुन्छ । शारीरिक प्रतिस्पर्धा र तर्क, विवाद वा न्याय सम्पादनका सिलसिलामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । सरकारी कामबाट फाइदा हुनेछ । खुट्टा तान्ने र कुरा काट्नेहरू आफैं चुप लाग्नेछन् ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) मुखमा सरस्वतीको बास छ, त्यसैले आज ज्ञान र सिप बाँडेर जस लिने समय हो । खासगरी छात्रछात्राहरूका लागि शैक्षिक प्रगतिका लागि अनुकूल समय आएको छ, अरु सबैले पनि साहित्यिक, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक गतिविधिमा संलग्न हुने समय छ । मित्रवर्ग र आफन्तबाट उपयोगी र आवश्यक सहयोग प्राप्त हुनेछ । मानप्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ । आफन्तबाट सहयोग र हौसला प्राप्त हुने छ । बन्दव्यापार र व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ प्राप्त हुनेछ । गृहस्थीजन छोराछोरीका माध्यमबाट खुसी हुने समय छ, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने छ । किशोरकिशोरीको भावनामा मन रुमल्लिने समय छ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) चन्द्रमा अशुभ छ, तर डराई हाल्नुपर्दैन । भाग्यस्थानमा राशिस्वामी रहेकाले मान्यजन, हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिसँगको छलफलबाट लाभ हुने सम्भावना छ । घरायसी वातावरणमा सुधार आउने छ । मनमा उत्साह र हौसला प्राप्त हुनेछ । मानसिक रूपमा सबल भइने छ । मित्रवर्ग, साथीभाइ र सहयोगीहरूले भरपूर सहयोग गर्नेछन् । आज आफ्ना लक्ष्य र योजनाका बारेमा खुलेर छलफल गरेमा सही मार्गदर्शन हुनसक्छ । तर्कवितर्क, झैझगडा र विवादका विषयमा अघि नबढेको राम्रो हुन्छ । प्रेमसम्बन्ध र दाम्पत्यसुखको राम्रो योग छ । स्वास्थ्यस्थितिमा सुधार आउने छ । छात्रछात्राले नयाँ र रचनात्मक काम सुरु गर्ने समय छ
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) दाजुभाइ र बन्धुवान्धवका क्रियाकलापले हर्षित बनाउने छ । सामाजिक क्रियाकलापमा आजको समय व्यतीत हुनेछ, मनमा आध्यात्मिक र दार्शनिक भावना जागृत हुनेछ । दिनदुःखीलाई दिएको सानो सहयोगले रोकिएको काम बन्न सक्छ । पशुपालक र दुग्धव्यवसायमा संलग्नहरूले मनग्ये लाभ प्राप्त गर्नेछन् । पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ । नजिकका मित्रबाट विशेष सहयोग र सुख प्राप्त हुने देखिन्छ । भोज, पार्टी वा मिठो भोजनका लागि अवसर प्राप्त हुने सम्भावना पनि छ । दीर्घकालिक फाइदाका लागि गरिएको प्रयास सार्थक हुनेछ । छात्रछात्राले पराक्रम प्रदर्शन गर्ने दिन हो । गृहिणीहरूले माइतीपक्षबाट शुभ समाचार पाउने छन् ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) भाँडाकुँडा, घरायसी बन्दोबस्तका सामान र सुनचाँदी जस्ता धातुको कारोवारबाट धेरथोर लाभ मिल्नेछ । बोलीमा पूर्ण प्रभाव छ, तर्कवितर्क र बहसमा विजय प्राप्त हुनेछ । धार्मिकरसामाजिक कामको दायित्व थपिन सक्छ । मिष्ठान्न भोजन मिल्नेछ । आफन्तले प्रशंसा गर्नेछन्, जाँगर बढ्नेछ । साथीभाइ र कुटुम्बले सहयोग गर्नेछन् अथवा आफैंले चेलीबेटी र कुटुम्बपक्षका काममा समय दिनुपर्नेछ । बन्दव्यापार राम्रो छ, आज साँझसम्म कुनै लाभमूलक काम बन्ने योग छ, अथवा कतैबाट अचानक धनलाभ हुनसक्छ । आर्थिक लगानी बढाउन अनुकूल छ । नयाँ ठाउँमा निवेश र लगानीको वातावरण बन्नेछ, कारोबारमा सुधार आउने योग छ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) आत्मनिर्णयको क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । जोस र जाँगर पलाउने छ, मन त्यसैत्यसै फुरुङ्ग हुने समय छ । उपहार पुरस्कार आदि मिल्नेछ । नयाँ काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने अनुकूल समय आएको छ । नयाँ कामको लागि नयाँ अवसर आउनेछ । निर्माण तथा व्यवहारिक क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ । दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन् । आफन्त र मित्रहरूसँग भेटघाट र रमाइलो गरिने छ । घरपरिवारमा राम्रो छ । बन्दव्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ । अन्न फलफूल आदि कृषिजन्य व्यवसायबाट राम्रो आर्थिक उपार्जन हुने योग छ । हाँकेरताकेका काममा सफलता मिल्नेछ । छात्रछात्राले पठनपाठनमा रुचि देखाउने छन् ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि)बाह्रौं चन्द्रमा रहेकाले मनमा उदासीनता आउने छ । खर्चभावमा चन्द्रमा रहेकाले अहिले दीर्घकालीन लगानी गर्नु उपयुक्त देखिंदैन । आर्थिक समस्याले सङ्कट उत्पन्न गर्न सक्छ, रकमको कारोबार र लेनदेनमा विवाद आउन सक्छ । जुवातास र सट्टाबाजीबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ । विश्वास गरेका व्यक्तिबाट नै धोका हुने सम्भावना छ । बन्दव्यापार तथा पेसाव्यवसायमा ध्यानकेन्द्रित हुन सक्दैन र पारिवारिक समस्याले पनि मन खिन्न हुनेछ । नचाहेको जिम्मेबारी आइलाग्न सक्छ, मनमा उत्साह देखिंदैन । परिवारका कुनै सदस्यको अस्वस्थताका कारण चिन्ता बढ्ने छ । धेरै टाढा जानु हुँदैन, लामो दूरीको यात्रामा झमेला आउने छ वा खर्चको मात्रा बढ्न सक्छ ।
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल ( भदौ ०५ गते बिहीबार)
यी राशि हुनेको आज भाग्य चम्किँदै ! हेर्नुहोस् आजको राशिफल (२०७६ भाद्र ०४ गते बुधबार)